Covid-19 and Phishing Alerts ( Cyber Security Alerts ) | Online Service Center Myanmar -->
Covid-19 and Phishing Alerts ( Cyber Security Alerts )
ဒီနေ့ Messenger ကနေ အသိတယောက်က အကိုရေ ဒီလိုမျိုး Link တွေလာပို့နေတယ်ဆိုပြီးပြောလို့ ကြည့်လိုက်မိတယ် သူဆီကိုပို့လာတာ Covid-19 ကာလမှာ အင်တာနက် 1000GB ကို Free ပေးထားတယ် Package ကို Activate လုပ်ဖို့ ဒီမှာဝင်လုပ်ပါဆိုပြီး Link တခုပေးထားတယ်။
အဲ့ဒီမှာ တခုသတိပြုမိသွားတာက အရင်တရက်က အသိတယောက်ဆီကနေ အခုလိုမျိုးပို့ပဲ ပို့လာတာတခုရှိတယ်ဆိုတာပြန်သတိရသွားတယ်၊ အဲ့ဒါကကျတော့ Netflix ကို Premium Free ၂ လစာပေးထားတယ်ဆိုပြီးဝင်လာတာ၊ သူတို့ပေးထားတဲ့ Link တွေက Short လုပ်ထားတဲ့ Link အတိုလေးတွေ။
ဘယ်သူက ဘာ Link လာပို့ပို့ ဝင်မကြည့်တတ်လို့ ဒီတိုင်းထားထားပေမယ့် ဒီနေ့တော့ လာပို့တာ ၂ ယောက်ရှိသွားပြီမို့လို့ Link ကို တိုက်ရိုက်မနှိပ်ပဲ Copy ယူပြီး ဘာ Facebook account မှ ဖွင့်မထား၊ ဝင်မထားတဲ့ Browser တခုထဲမှာ သွားထည့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ Phishing ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။
အူတူတူ အတတနဲ့ အလကားရတာပဲဟဆိုတဲ့သူတွေ၊ ဘာလည်းမသိဘူး ဝင်စပ်စုကြည့်ဦးမှပဲဆိုတဲ့သူတွေ၊ ဆိုရင်တော့ Link ကို နှိပ်ကြည့်( ဝင်ကြည့် ) လိုက်တာနဲ့ ခံလိုက်ရပြီသာမှတ်ပဲ၊ အရင်ဆုံး Access Token အခိုးခံရမယ်၊ Phishing မိမယ်၊ ကိုယ့်အကောင့်က Spammer အကောင့်ဖြစ်မယ်၊ Account Hack ခံရမယ်၊ Blackmail လုပ်ခံရမယ်၊ Personal Attack လုပ်ခံရမယ်၊ Link လေးတခုနှိပ်ကြည့်မိလိုက်တာနဲ့ အဲ့လိုတွေခံရနိုင်တယ်။
1. ပထမဆုံး Link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook Account ရဲ့ Access Token( User Name and Password နဲ့အတူတူ ) ကို အရင်ဆုံးပေးလိုက်ရပါပြီ၊ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ့်အကောင့်ကို တဖက်ကထောင်ဖမ်းထားသူက လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရသွားပါပြီ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲ့ဒီ Short Link နောက်ကွယ်က Link ထဲမှာ ကိုယ့်အကောင့်ကို လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ပေးဖို့ Permissions တောင်းထားတာပါပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
2. နောက်တခုက Link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန် ကိုယ့်အကောင့်ကြီး Logout ထွက်သွားလို့ Login ပြန်ဝင်ခိုင်းနေတာမျိုးမို့ ကိုယ့်ရဲ့ User Name နဲ့ Password ကိုထည့်ပြီး Login ဝင်လိုက်တာနဲ့ တဖက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ User Name နဲ့ Password ကို ပေးပို့ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ၊ တဖက်က Log file ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့် အချက်အလက်တွေနဲ့ Login မဝင်မချင်းတော့ ကိုယ့်အကောင့် ပါဦးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဝင်ကြည့်ပြီး အကုန်ချိန်းယူသွားရင်တော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပဲ‌ပေါ့။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အကောင့်က Two-factor လိုမျိုး Login Approved code ခံထားတယ်ဆိုရင်တော့ တဖက်က အလွယ်တကူဝင်လာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Login Approved ကိုဖြုတ်တာက မြန်ရင် ၅ မိနစ်အတွင်းပြုတ်သလို၊ အလွန်ဆုံးကြာရင် 12 နာရီကနေ 24 နာရီအတွင်းမှာပဲ ပြုတ်အောင်ဖြုတ်လို့ရသွားတတ်ပါတယ်၊ Account Security ကို ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ခံပေတော့ပဲ။
3. အဲ့ဒီ Link ကိုဝင်လိုက်မိတာနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတင်ရယူသွားတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့် Friend List ထဲက လူတွေရဲ့ Account info တွေကိုပါ ရယူဖို့လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ကိုယ့်အကောင့် info ပါရုံတင်မက၊ ကိုယ့် Friend တွေရဲ့ info တွေပါ အူတူတူအတတနဲ့ပါအောင်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားပါသေးတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်သူက ဘာ Link တွေလာပို့ပို့ ဖင်ယားပြီး ဖွင့်မကြည့်၊၊ ဝင်မကြည့်ကြဖို့လိုပါတယ်၊ အဲ့ဒါမှ ကိုယ့်အကောင့်ရော ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကောင့်တွေကို Safe ဖြစ်စေမှာပါ။
ဒါက အင်တာနက် 1000GB အလကားရမယ်ဆိုပြီး ပို့လာတဲ့ Message.
To counter the Corona virus 🦠 we offer you *1000GB* of free internet Connection to stay at home safely and enjoy the internet Activate the internet package 🌐 👇🏼 *Get it now HERE* 👇🏼
သူပေးထားတဲ့ ဒီ Link https://shorturl .at/ksFMN ကို ယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ကခေါင်းစဉ်နဲ့ Facebook login ကိုတွေ့တယ်၊ Messenger ထဲကနေတာ တန်းနှိပ်လိုက်ရင် နားကားပြီပဲ။
Log in to your Facebook account to connect to Gbs Internet
ဒါက ပါမစ်တောင်းထားတဲ့ Link -
ဒါက နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတွေ့ရမယ့်နေရာ၊ အူတူတူအတတနဲ့ လိုက်လုပ်ခဲ့ရင် ကိုယ့် Friend list ထဲက အကောင့်တွေပါ ဒုက္ခရောက်သွားစေအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာ -
ဒါကနောက်တခု Netflix Premium ကို2လ Free ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ။
*2 Months of Netflix Premium Free at no cost For REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)*
Get2Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days.
👇🏼 *Get it now HERE* 👇🏼
Log in to your Facebook account to connect to Netflix
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက အပေါ်ကလို Messenger ကနေလာပို့ရင် လောဘဇောတက်ပြီး လျှောက်ဝင်မကြည့်၊ နှိပ်မကြည့်ကြပါနဲ့၊ အခုလို မက်လုံးပေးပြီ ထောင်ဖမ်းထားတာမျိုးမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူ့အကောင့်တွေကနေ၊ ဘာ Link လာပို့ပို့ ဝင်မကြည့်ကြပါနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးတဲ့သူ၊ ယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူက လာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် လာပို့တဲ့ Link တွေကို နှိပ်မကြည့်ကြပါနဲ့၊ ဖင်ယားပြီး နှိပ်ကြည့်မိရင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်တာကိုယ့်ဘာသာခံကြပါ၊ တခုခုဆက်ဖြစ်လာတော့မှ အဖေကယ်ပါ၊ အမေကယ်ပါတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့။
Covid-19 ကာလမှာ သတိထားပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။
[[ Edit လုပ်ပြီးထပ်ဖြည့် ]]
လာပို့တဲ့ Link ကိုဝင်ကြည့်မိထားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်...
1. Password ချိန်း။
2. Settings => Security and Login => Where your login မှာ See All ကိုနှိပ်ပြီးစစ်၊ ပြီးရင် Logout All Device လုပ်။
3. Apps and Website ထဲဝင်ပြီး Login with Facebook နောက်နားက Edit လေးကိုနှိပ် အထဲကိုဝင်ပြီး log ကို Delete လုပ်။
Aung Kyaw Soe( 14.4.2020 - 5:21 PM )
#Covid19 #Coronavirus #Security #CyberSecurity #Phishing #Scam #ScamMessage #ScamLink
Facebook Knowledge Messenger Security Sharing Technology